Ingabe Imfundo Iyikhambi? | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 8, 2008 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 Douglas Karr
Ngibuze umbuzo ku Buza abantu abangama-500 ethola impendulo ethokozisayo. Umbuzo wami bekungukuthi:
Ngabe amakolishi ayindlela nje ehlelekile yokudlulisa ukungazi kusuka kwesinye isizukulwane kuye kwesinye?
Okokuqala, ake ngichaze ukuthi ngiwubhale lo mbuzo ukuze ngikwazi ukuqala impendulo - ubiziwe ukuxhumanisa ukubheja futhi kwasebenza. Ezinye izimpendulo engizitholile ngokushesha bezingenanhlonipho, kepha ukuvota kukonke kube nomthelela.
Kuze kube manje, 42% labavoti bathe yebo!
Ukuthi ngibuze umbuzo akusho ukuthi ngumbono wami - kepha kuyangikhathaza. Kuze kube manje, okuhlangenwe nakho kwendodana yami ku- IUPUI bekumangalisa. Ungumpetha weMaths nePhysics othole ukunakwa okuningi ngokwakha ubudlelwano nokuxhumana nabasebenzi. Osolwazi bakhe bamphonsele inselelo ngempela futhi bayaqhubeka nokwenza njalo. Bamazise nakwabanye abafundi abaphumelela ezifundweni zabo.
Kuthelevishini nasezingxoxweni eziku-inthanethi, ngiyaqhubeka nokuzwa imfundo yomuntu kubhekiselwa kuyo njenge the isinqumo esinqumayo kwabaningi egunyeni nakulwazi lomuntu. Ingabe imfundo iwubufakazi begunya? Ngikholwa ukuthi imfundo yangemva kwamabanga aphezulu inikezela ngezinto ezintathu ezibalulekile kumuntu:
Amandla wokuqedelela i- inhloso yesikhathi eside. Iminyaka emine yasekolishi ingumphumela omuhle futhi inika abaqashi ubufakazi bokuthi ungafinyelela futhi unikeze ophothule iziqu ngokuzethemba kwamakhono akhe.
Ithuba ujulise ulwazi lwakho nolwazi, ukugxila esihlokweni osikhethayo.
Insurance. Iziqu zasekolishi zinikeza umshuwalense omningi ekutholeni umsebenzi ofanele ngomholo ohloniphekile.
Engikukhathazayo ngemfundo ukuthi abaningi bakholelwa ukuthi imfundo yenza umuntu 'ahlakaniphe' noma ibanikeze igunya elingaphezu kwalabo abangafundile kangako. Kunezibonelo ezingenakubalwa emlandweni lapho abaholi abacabangayo beklolodelwe yilabo abafundile… baze bakhombisa ukwehluka. Bese bephathwa njengokwehlukile, hhayi umthetho. Ukuphawula okukodwa kulo mbuzo kukusho kahle:
… Ibonakala ingcindezelo, ngokungafani nenkulumo, icishe 'iphoqelelwe' ezimweni eziningi. Ukuvezwa kokuhlukahluka, kuwo wonke amazinga, yingxenye 'emnandi' yemfundo yasekolishi. Kimi, lokhu kuvezwa yilokho okuhlangenwe nakho kwezemfundo okufanele kube ngakho. Ngizizwa PC abe / anciphisa kakhulu ukucabanga kwamahhala.
UMark Zuckerberg ungumuntu omncane ukwedlula bonke ukwenza uhlu lwezigidigidi zeForbes. Nayi ifayili le- inothi elithakazelisayo kuZuckerberg:
UZuckerberg wafunda eHarvard University futhi wabhaliswa ekilasini lika-2006. Wayeyilungu leqembu le-Alpha Epsilon Pi. E-Harvard, uZuckerberg uqhubeke nokwakha amaphrojekthi akhe. Wahlala no-Arie Hasit. Iphrojekthi yokuqala, iCoursematch, yavumela abafundi ukuthi babuke uhlu lwabanye abafundi ababhalise emakilasini afanayo. Iphrojekthi yakamuva, i-Facememash.com, ibiyisayithi lokulinganisa isithombe eliqondene neHarvard elifana ne- Okushisayo noma Cha.
Uhlobo lwalesi siza beluku-inthanethi amahora amane ngaphambi kokuthi iZuckerberg ingene kwi-Intanethi ukuhoxiswa yizikhulu zokuphatha. Umnyango wezinsizakalo zamakhompiyutha waletha uZuckerberg phambi kweHarvard University Administrative Board, lapho abekwa khona icala lokwephula ukuphepha kwamakhompyutha nokwephula imithetho yobumfihlo be-Intanethi nempahla yokusungula.
Nangu umfundi kwelinye lamayunivesithi ahlonishwa kakhulu ezweni okhombise ithalente elinamandla lokuhweba. Impendulo evela eyunivesithi? Bazama ukumvala! Siyabonga okuhle ngoMark ukuthi uqhubeke nemizamo yakhe futhi akazange avumele ukusungulwa kumvimbe.
Ingabe Sifundisa ukuthi “Kanjani” vs “Yini” Okufanele Ucabange?
U-Deepak Chopra ubuze umbuzo nge-Seesmic mayelana intuition. Angizukunikeza umbuzo wakhe ubulungiswa, u-Deepak Chopra uhamba phambili (ngombono wami othobekile) wezazi zefilosofi nezazi zemfundiso yenkolo zanamuhla. Unombono oyingqayizivele ngempilo, indawo yonke, kanye nokuxhumana kwethu.
Impendulo eyodwa kuDeepak ukuthi imfundo yalowo muntu yamnikeza amandla okuhumusha ngokunembile izinto ezisemvelweni yakhe ukumnikeza 'intuition'. Ingabe leyo intuition? Noma ingabe ilungile noma iyabandlulula? Uma isizukulwane ngesizukulwane sifundiswa 'ngobufakazi' obufanayo nangezindlela ezifanayo zokuhumusha okuguquguqukayo - ingabe sifundisa abantu indlela cabanga? Noma sifundisa abantu yini ukuze cabanga?
Ngibonga ithuba lami lokuya ekolishi futhi iphupho lami ukuthi nezingane zami ziphothule ekolishi. Kodwa-ke, ngithandazela ukuthi njengoba befunda kakhulu, imfundo yezingane zami ingaziholeli izenzo ze-hubris. Imfundo ebizayo ayisho ukuthi uhlakaniphile, futhi ayisho ukuthi uzoba yisicebi. Ukucabanga, umuzwa, nokuqina kubaluleke kakhulu njengemfundo enhle.
UWilliam Buckley, osanda kushona, wake wathi, “Kungcono ngilawulwe ngamagama okuqala angama-2000 encwadini yezingcingo yaseBoston kunamadononi aseHarvard."
Tags: degreesImfundouphawu lwe-zuckerbergizinga lokuthengisazokuqalayunivesithiUWilliam buckley
Mar 9, 2008 ku-1: 57 AM
UDoug - okuthunyelwe okumangazayo !!
Angiyena umlandeli wohlelo lwethu lwamanje lwezemfundo. Ngivumelana ngokuphelele nomqondo wokuthi yisizukulwane esisodwa esidlulisa ukungazi kwesinye.
Ngikholwa ukuthi sidinga ukuthi sifundise thina UKUCABANGA. Kaningi sifundiswa ukukhumbula nokukhumbula.
Mar 9, 2008 ku-7: 40 AM
Yebo, kepha uBuckley waya kuYale.
Mar 10, 2008 ku-10: 03 AM
Ha! Iphuzu elihle, Clark!
Mar 9, 2008 ku-9: 10 AM
Yize ngingazi ukuthi i-US ihlela kanjani futhi iyinikeze uhlelo lwezemfundo, nginokuqonda okuthile ngohlelo lwase-UK. Kuyabheda ..
Ngeke angene kwezombusazwe, kodwa uhulumeni wethu wamanje (http://www.labour.org.uk/education) bafuna ama-50% abaneminyaka engu-18 ukuthola iziqu eyunivesithi (http://en.wikipedia.org/wiki/Widening_participation)… Inkinga ngalokhu ?? Kwehlisa inani leziqu.
Njengoba lelo banga liba yize, futhi kubaluleke kakhulu ukufeza imiphumela ethembekile, ukuze ufunde i-PhD noma amakhosi.
Inhloso yeziqu ukunikeza amandla wokuthatha imininingwane emithonjeni eminingi, bese ukuguqula lokho kube ukuqonda. Akukhona lokho okufundayo, kodwa ukuthi ukukwenza kanjani.
Mar 10, 2008 ku-10: 05 AM
Lelo iphuzu elivelele. Uma wonke umuntu ezweni ethola iziqu zakhe - i-degree iba yisilinganiso esiphansi futhi. Mhlawumbe imisebenzi engadingi degree izodinga eyodwa lapho wonke umuntu enayo.
Mar 9, 2008 ku-10: 25 AM
Uma ubheka izizathu zakho zokuthi imfundo ephakeme ibalulekile, uzobona ukuthi azikho ezibandakanya ukufunda ukucabanga.
Esiseduzane ngu- # 2, okukunikeza izinto zokusetshenziswa okufanele ucabange ngazo. Impendulo yombuzo kaDeepak Chopra owukhulumile, ngicabanga, ikhuluma ngaleli phuzu. Intuition idinga izinto zokusetshenziswa okufanele zisebenze kuzo. Lapho wazi okuningi, maningi amathuba okuthi kwenzeke.
Ingabe ikolishi yindlela yokudlulisa izizukulwane ngokungazi kwamanje? Kubhekwe kabi, yebo. Kubhekwe kahle, kuyindlela yokudlulisa izinga lamanje lolwazi. Uma unenhlanhla, uthola othisha nabeluleki abakukhuthaza ukuthi udlule lelo banga lamanje lolwazi.
Kubantu abaningi, nokho, ikolishi yisikole sokuhweba esikhazimulisiwe, indlela yokwenza ukuxhumana okuzoqhubekisela phambili umsebenzi wabo, kanye nendlu ephakathi nendawo phakathi kobuntwana kuya ekubeni mdala.
Mar 10, 2008 ku-10: 11 AM
Angizange ngiyibeke njengesizathu ngoba angicabangi ukuthi yilokho okutholakala ngemfundo yanamuhla yangemva kwesekondari. Ngeqiniso anginalo ukholo oluthe xaxa lapho ngiqasha umuntu othweswe iziqu zasekolishi kunokuthi ngiqashe umuntu oqedile esikoleni esiphakeme ukuthi banamakhono okudala adingekayo ukuze baphumelele emsebenzini wanamuhla.
Ngikushilo ngaphambili ukuthi ngifuna ukuthi izingane zami zombili zithole iziqu zazo (okungenani); kepha angikholwa ukuthi ukuthola idiploma kuzobaqinisekisa ngempumelelo. Ngikholwa kuphela ukuthi kuzobavikela ekuhlulekeni.
Mar 10, 2008 ku-2: 20 PM
Uthe igama lomlingo: ubuqambi
Ukusebenzisa umcabango / ubuhlakani ngendlela efanele kuyindlela yokufunda nokuqamba futhi lokho akuthathi imfundo yesibili. Kepha ngicabanga ukuthi ngaphezu kwakho konke, kufanele sifunde ukungayinaki imizwa engemihle evimba indlela yokucabanga okufanelekile evimba indlela yesenzo esifanele / esihle.
Mar 11, 2008 ku-12: 59 AM
Sengikholelwa ukuthi into ebaluleke kakhulu umuntu angayithola ekolishi yinto engazange ifake. Ngicabanga ukuthi isizathu esihle kunazo zonke sokuya ekolishi ukuncintisana nokusebenzisana nontanga, Futhi kangcono ukuthi isikole siba ngcono ontanga njengoba umuntu elwela ukuya ezingeni lontanga yakhe. Ikakhulukazi lapho labo ontanga bekwazi kusuka kokuhlangenwe nakho okuhlukile kanye / noma amasiko ahlukile kunami.
Ngithole okuningi kakhulu ekutadisheni nabanye abafundi nasekubandakanyekeni emisebenzini yesikhashana kanye nabo kunanoma iyiphi enye ingxenye yasekolishi.
Ngeshwa kunesigaba esikhulu sabantu bethu (~ 42%?) Esaba amakolishi, ikakhulukazi amakolishi angcono, ngoba baphoqa abafundi ukuthi bazibuze ukubandlulula kwabo kanye nemibono ababenayo ngaphambili. Baningi kakhulu abantu abangathanda ukukholelwa nje kulokho abafuna ukukukholelwa futhi ngaleyo ndlela bazizungeze nabanye abanika amandla imikhuba yabo yokuziphatha njengoba bekhawulela ukubuka kwabo umhlaba. Ngemuva kwakho konke, indlela engcono kakhulu yokukholwa yilokho umuntu afuna ukukukholelwa ukuqinisekisa ukuthi abukho ubufakazi obuphikisana nalokhu.
Uma sizoqhubekela phambili njengezwe, njengomhlaba, njengohlanga lwesintu, abantu kuzodingeka badlule kulesi sidingo sokugula ukuze bavimbe noma yini ephikisana nombono wabo womhlaba oqinile. Ngeshwa, ngokususelwe kulokho engikubonile kwenzeka kule minyaka eyishumi edlule, anginalo ithemba elikhulu lokuthi abantu abaningi bazobeka eceleni imibono yabo etholakele ukuze kwenzeke lokho empeleni.
Mar 11, 2008 ku-8: 48 AM
UMike - lelo iphuzu elihle kakhulu. Ngivela emndenini ohlukahlukene futhi sihlale ezweni lonke - kepha kwabaningi, lesi yisikhathi sokuqala ukuthi abantu abasha baxhumane namanye amasiko angaphandle komakhelwane wabo.
Ngeqiniso anginalo ithemba elikhulu. Ngicabanga ukuthi abantu bavota 'ngomoya' futhi abasabeki mqondo kuwo. Amaqembu ama-2 asebenze kahle ekusebenziseni izimonyo.
Mar 11, 2008 ku-5: 27 PM
Angicabangi ukuthi amaqembu alo njengabantu. Ikakhulukazi abantu abahlangana ngamaqembu nezintshisekelo ezikhethekile njengo-501 (c) s kanye "namathangi okucabanga." Akusoze kwashintsha kuze kube yilapho abantu bevuka futhi babone ukuthi kudlalelwa izidladla.
Ingxenye yephuzu lami bekungukuthi abantu banemibono egxilile kangangokuba bacela ukusetshenziswa. Akuzona amaphutha eqembu abazulazula emibonweni yabantu futhi babaxabanise “nabanye” ukuze bathole amandla abo. Amaqembu asanda kufunda ukuthi angafeza kanjani izinhloso zawo, ukuze akhethwe.
Ama- “Liberal” ne- “conservative” ngamanye amalebula amanje okuhlukanisa lapho amaqembu akhohlisa abantu ngokushumayela imibono kanye nokwenza idemoni elinye iqembu elifanele futhi elikhonjwe kalula elingekho ezimweni eziningi. Laba bantu basebenzisa ukwesaba futhi bahlukanise ngokwenkolo, ubuhlanga, ubulili, ukuthanda ezocansi, amasiko, ukuma kwezwe, ubuzwe.
Ngenkathi ngisemncane sasinayo "impi ebandayo" kepha ngemuva kwalokho yahamba ngacabanga ukuthi sinohlelo lwezwe elisha olungasebenza kwezentengiselwano futhi luhlale ngokuthula. Nganginonkulunkulu wami.
Ngo-Apr 6, i-2008 ku-1: 27 AM
Bengicabanga ukuthi ungakujabulela ukubona ukuthi ubani omunye onalo mbono…
"… Amasiko esizwe adabukisayo adluliswa njengesifo esizuzwe ngofuzo kusuka kwesinye isizukulwane kuya kwesinye ngokusebenza kohlelo lwezemfundo."
Ngo-Apr 8, i-2008 ku-12: i-43 PM
Ngisanda kuthola lokhu, kupholile kakhulu!
Jul 6, 2009 ngo-4: 38 PM
Ngithole le ndatshana emnandi: Ububi be-Elite Education.